ERussia, iningi labantu abahlukanisayo kwenzeke ngenxa ukudakwa ka omunye abashadayo. Kodwa uma ufuna ngempela ukusindisa umkhaya, utshani puppeteer ongeza azosiza abashadayo. Ukuphuza ngokweqile akusona isitshalo esetshenziswa isikhathi eside, ngakho akungabazeki ukuthi okusindisayo ukuphuza. Ngingakusebenzisa kanjani-ke?
Utshani puppeteer: izinkomba KANYE USAGE
Kusukela ezikhathini zasendulo, abantu baye basebenzisa yona ukusebenzisa uphuzo ngokweqile, by nezintwala. Ngo wezilwane isetshenziselwa izifo zesikhumba yisinanakazana, kanye nokuthuthukisa kanye shayela emesis ukugaya.
Utshani puppeteer utshwala usetshenziswa ngale ndlela elandelayo: ithisipuni elilodwa ke ukwenziwa inkomishi abilayo amanzi nengxenye. Phikelela kufanele kube ihora elilodwa. Isidingo samanje ukuba nzima futhi ungeze omunye uhhafu ingilazi yamanzi. I kwaphumela "Potion" yengezwe iziphuzo ezidakayo nezinto zokuhlanza ukudla. Isimo main - ukunikeza umhluzi isiguli kuphela uma uphuza. Ukwelashwa kufanele kuqale ngemithamo emincane, amabili ukuze amaconsi ambalwa ngosuku (izikhathi 3). Sidinga ukwandisa umthamo kancane kancane, kodwa nakanjani kudingeka siqiniseke ukuthi isiguli kubekezelelwe lokhu kwelashwa ngokujwayelekile.
Indoda yokuluthwa ukuphuza ungazizwa noma yiluphi ushintsho ukunambitheka kokudla, njengoba puppeteer utshani ayinakho ukunambitheka. Umphumela kuzobonakala ngemva "nesineke," futhi kuhlangana esetshenziswa utshwala uzoqala ukuzwa isicanucanu nokuhlanza. Engazi ukuthi hit puppeteer utshani utshwala esimisweni sakhe, abantu bazocabanga ukuthi ukuphuza nje eliphansi oludakayo. Kodwa lapho kwaba - ngokuhamba kwesikhathi nge umthamo utshwala ngamunye ezovela ukuhlanza nesicanucanu, futhi umphumela waba ukuthi Ufika unesizungu, futhi ekugcineni zibe ukuya utshwala.
Utshani puppeteer utshwala kuphakamisa ukuhlanza hhayi kuphela, kodwa futhi kunomphumela laxative. Futhi kunciphisa nolaka we ophuzayo. Ngakho Akubalulekile ukunikeza decoction isiguli ezinsukwini lapho iwayini seliphumile.
Njengoba sazi, kunoma iyiphi ekhemisi ungakwazi ukuthenga puppeteer (utshani ukuluthwa utshwala), intengo iphansi ukuze zokwelapha kungase zingatholakali ngisho nemindeni ukuthola iholo eliphansi kakhulu. Into ebaluleke kakhulu - ngakho ulungise umthamo ukuze singathwesi overdo it. Ngokwesibonelo, uma isiguli Wawuthatha nsuku zonke ezingaphezu kuka-10 amathonsi, kungase kuvele nemiphumela eyingozi umzimba, kuhlanganise elinobuthi, ngezinye izikhathi kube nemiphumela ebulalayo.
izimpawu Overdose okubi kakhulu: liqhaqhazela emzimbeni, uhudo, ukuhlanza, umfutho ophansi wegazi, Ukudlikizela. Uma izimpawu ezifana kuyagcinwa e umuntu obelokhu puppeteer, ngokushesha shayela i-ambulense futhi qiniseka ukuchaza amaqembu ezokwelapha, yini eyabangela isimo okunjalo isisulu. Ukuhlinzeka usizo lokuqala, isiguli kumele wenze lavage esiswini ne-carbon ocushiwe 2% isixazululo of sodium hydrogen carbonate. Kungenzeka futhi ukusebenzisa esikhundleni indlela 0.2% isixazululo of tannin nge namalahle isebenze.
Awukwazi sebekubeke ingasetshenziswa kubantu abaphethwe izifo zenhliziyo nemithambo yegazi.
Ukuzilapha, esebenzisa utshani puppeteer utshwala, kungabangela isiguli ubuthi obukhulu ngisho nokubabulala! Ngakho-ke, ngaphambi kokufaka isicelo nakanjani kudingeka xhumana nodokotela-narcologist.
Uwoyela Lilac - ukulungiselela emangalisayo yezokwelapha
Izindawo zokubhuka ezisezingeni eliphezulu eRussia: ukulinganisa nokubuyekezwa
Khekhe ne cottage shizi wenza kusukela inhlama: iresiphi of ehla esiphundu